Simpleton - यो ... "पवित्र मूर्ख" को अर्थ। पवित्र मूर्ख
मान्छे विश्वास परमेश्वरको मूर्ख कि - आफ्नो मानसिक रोग वा शारीरिक दोष को अनिवार्य उपस्थिति एउटा मानिस। सरल मामलामा, यो नियमित मूर्ख छ। चर्च निरन्तर बढिनै त्यस्ता मानिसहरूलाई spontaneously दुःख, enveloping पर्दा साँचो दया विचार लुकाउँछ भनेर आफूलाई डुम भनेर बहस, यो परिभाषा refutes। धर्मशास्त्र को मूर्ख र मूर्ख को प्रकृति रूपमा यी दुई अवधारणाहरु बीच भेद गर्न भनिएको छ "ख्रीष्टको खातिर।" यदि बुझेका थप विस्तार कुरा गर्नुपर्छ दोस्रो बारे के सबै प्रकारको पहिलो प्रकार। तिनीहरूले आफूलाई अनन्त Wandering र एकाकीपनको गर्न condemning सांसारिक सामान र सुखसुविधा देखि आफूलाई जोगाउन परमेश्वरले ascetics भयो बलियो प्रेमले कारण हो। एकै समयमा तिनीहरूले राहगीरों-द्वारा बहकाउने प्रयास, सार्वजनिक मा एक पागल, अश्लील व्यवहार उठयो सक्छ। कार्यालयमा प्रार्थना र महिना को हप्ताको मार्फत, तिनीहरूले धरती गरेको ख्याति भाग्न प्रयास, दूरदृष्टि संग endowed, तर यो बाबजुद थिए।
आदर्श एक blissful लागि वस्त्र - मानव शरीर को लागि, नाङ्गो, यातना शरीर देखाउन अवहेलना perishes। नग्न तस्वीर दुई अर्थमा वहन। पहिले, यो एक परी को शुद्धता र निर्दोष छ। दोश्रो, कामवासना, अनैतिकता, गोथिक कला छ जो शैतानको को personification, सधैं रूपमा नाङ्गो देखा छ। यो सुट अन्य लागि विनाश केही मुक्तिको लागि जस्तै, एक दोहरी अर्थ छ, र। शर्ट, वा loincloth - अझै तिनीहरूले लुगाहरू को एक विशिष्ट विशेषता थियो।
भाषा पवित्र मूर्ख द्वारा बोली - मौन। मानव भरिएको र आवाज भविष्यवाणी पर्दाफास गर्न: तर dumbness अनुयायीहरूलाई यो अनमोल को प्रत्यक्ष जिम्मेवारी विपरीत थियो, केही थिए। तिनीहरूले मौन र प्रसारण बीच केहि गरे। भक्त incoherently mumbling र incoherent अर्थहीन पूरा whispered।
शब्दहरू को व्याख्या
एक madman र मूर्ख रूपमा पुरानो Slavonic देखि अनुवाद मूर्खता, निम्न शब्दहरू बाट लिइएको हो: ourod र yurod। अध्ययन शब्दकोश Ozhegova, एप्रैम र दलियालाई भइरहेको, हामी यस्तै शब्दहरू अर्थ लोड भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।
1 धर्म मूर्ख मा - आफूलाई लागि ascetic को बाटो रोज्ने, पार्थिव लाभ renounced मानिसलाई। बुद्धिमानी मूर्ख, शुद्धि को अनुहार को एक। (बेवकूफ danced र रोए। V.I.Kostylev "इवान ग्रोजनी")
2. शब्द पुरातन अर्थ "मूर्ख"।
3. अस्वीकृति पद मानिस belittles: एक Eccentric, पागल। (म आज कार्यान्वयन थियो एक जवान vagrant पवित्र मूर्ख, जस्तै हेर्नुहुन्छ? M.A.Bulgakov "मास्टर र Margarita")
को raison d'être
आफ्नो व्यवहार तिनीहरूले कार्यहरू र कामहरू एक caricature को रूप मा उनलाई देखाउँदै मान्छे संग तर्क गर्न खोजे। तिनीहरूले यस्तो ईर्ष्या, क्रूरता, रिसले रूपमा मानव भरिएको रमाइलो गरे। यो लज्जाजनक अस्तित्व मा लाज को एक भावना जनता मा ल्याउन क्रममा गरेको थियो। निष्पक्ष buffoons विपरीत मूर्ख व्यंग्य र व्यंग्य काटन गर्न Resort थिएन। तिनीहरूले आफ्नो जीवन यात्रा गुमाएका मानिसहरूलाई प्रेम र दया नेतृत्व गरेका थिए।
Simpleton दिनुभयो, पहिले सम्पूर्ण जनसंख्याको Ustiug प्रार्थना अर्को आइतबार बिहान कल, परमेश्वरको इच्छा को राजदूत संग आफूलाई तुलना गर्ने, अन्यथा परमेश्वरले तिनीहरूको शहर दण्ड हुनेछ। आफ्नो obsmeyali, पागल छलफल। केही दिन पछि उहाँले डबडबाई आँखों से बासिन्दाहरू पश्चात्ताप गर्न, र प्रार्थना फेरि सोधे, तर फेरि सुने थिएन। चाँडै आफ्नो भविष्यवाणी साँचो आए: शहर एक भयानक आँधी थिच्नुहोस्। डराउने मान्छे गिर्जाघर मा र परमेश्वरको आमा नजिकै भाग्यो, तिनीहरूले अनमोल प्रार्थना पाइयो। बासिन्दा पनि भन्दा, व्यग्र प्रार्थना गर्न थाले र विनाश देखि आफ्नो शहर सुरक्षित छ। धेरै, आफ्नो प्राण सुरक्षित र परमेश्वरको आफ्नो Gaze खोल्दै। हरेक रात धन्य Procopius गर्मी र चिसो चर्च कौसी मा प्रार्थना समय बिताए र बिहान एक dunghill मा सुत्न।
एन्टिओकमा, पवित्र मूर्ख एक जो आफ्नो खुट्टा कुकुर बाँधिएको मृत को फारम, मा पहिचान चिन्ह थियो, अवलोकन गरेका थिए। यस्तो oddities मानिसहरूलाई निरन्तर तिनीहरूलाई खिसी गरे किनभने, अक्सर kicked र कुटपिट। यसैले पवित्र मूर्ख भन्ने निष्कर्षमा - एक शहीद, तर यो शब्द को शास्त्रीय समझ, गर्न विपरीत दुखाइ अनुभव र एक पटक होइन पीडित, तर आफ्नो जीवन भर।
ख्रीष्टको धन्य एन्ड्रयू मूर्ख
सम्राट्लाई LVA Velikogo को शासनकालमा - बुद्धिमान् Constantinople, जसलाई बीचमा केटा थियो धेरै दास किनेको छ मानिस, बस्थे स्लाव भाषाहरु उपस्थिति को एन्ड्रयू नाम। मालिक तिनलाई सुन्दर जवान, smyshlen र दयालु थियो किनभने अरूले भन्दा प्रेम गर्नुभयो। बाल्यकाल देखि भ्रमण गर्न आफ्नो मनपर्ने ठाँउ पढ्ने उसले धर्मशास्त्र प्राथमिकता दिए, चर्च थियो। उहाँले प्रार्थना लागि शैतानको समातिए र ढोका दस्तक गर्न थाले भएपछि, भ्रममा। एन्ड्रयू डराएको पायो र ओछ्यानमा मा कूद, एक बाख्रा को छाला ढाकिएको। उहाँले चाँडै निदाउनु, र उहाँले तिनलाई दुई सेनाले देखा जो एक सपना थियो। युद्ध को एक हामी स्वर्गदूतहरू जस्तै उज्यालो राज बस्त्र थिए, र दुष्ट र धर जस्तै अन्य देख्यो। कालो सेतो सेना आफ्नो शक्तिशाली विशाल संग लड्न प्रस्ताव, तर तिनीहरूले लड्न हिम्मत गरेनन्। त्यसपछि उहाँले स्वर्गबाट तल svetloliky युवा आए। आफ्नो हात मा तीन मुकुट unearthly सौन्दर्य थिए। Andrei जो उसलाई यस्तो सौन्दर्य देखेर, होस्ट दिइएको थियो कुनै पनि मूल्य, तिनीहरूलाई किन्न खोजीमा थिए। तर स्वर्गदूतले यी माला कुनै पनि पार्थिव धन लागि बेचिएको छैन भन्दै, अर्को संस्करण प्रस्ताव, तर उहाँले कालो विशाल जीत यदि तिनीहरूले एन्ड्रयू आबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड्रयू, उहाँलाई पिटे पुरस्कार crowns प्राप्त, र त्यसपछि सबैभन्दा उच्च शब्दहरू सुने। प्रभु उहाँलाई लागि blissful बन्न एन्ड्रयू भनिन्छ र धेरै पुरस्कार र सम्मान प्रतिज्ञा गर्नुभयो। Simpleton यो सुने र परमेश्वरको इच्छाअनुसार गर्ने निर्णय गरे। त्यो समय देखि, एन्ड्रयू नाङ्गो सडक हिंड्न, चक्कु शरीर को सबै आफ्नो बीहड पूर्वसन्ध्या देखाउँदै पागल हुन मानिरहेको, inarticulate gibberish पूरा गर्न थाले। वर्षौंदेखि उहाँले पछाडि मा अपमान र थूकना सहेका भोक र चिसो, गर्मी र तिर्खा सहेका, र अन्य गरिब वितरण alms पाए। उनको नम्रता र धैर्य, उहाँले जो नष्ट प्राण धेरै सुरक्षित र सफा पानी deceivers र evildoers ल्याए clairvoyance र प्रेतविद्यासम्बन्धी उपहार प्रभु देखि एक पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
को Blachernae चर्चमा प्रार्थना पढ्ने, Constantinople को एन्ड्रयू उहाँले आशिष् प्राप्त कसलाई देखि अनमोल भर्जिन मरियम देखे। 936 मा, एन्ड्रयू मृत्यु भयो।
मानिसहरूको पाप संग, तर पनि आफ्नै मात्र छैन गर्व संग, उदाहरणका लागि, लड्न मूर्ख। तिनीहरूले नम्रता जीवन को वर्ष प्राप्त गरेका सबै मानव आक्रमण र beatings बच्न मद्दत गर्छ। तर आफ्नो नम्र अनि आज्ञाकारी तिनीहरूले कमजोर-इरादों र mollusks छन् भन्न छैन। कहिलेकाहीं तिनीहरूले मानिसहरूलाई बाँकी डराउने थिए र आफ्नो आँखा कम जहाँ खडा देखि चर्को बयान बनाउन।
एउटा उदाहरण इतिहासमा
निकोलस Sallosom द्वारा धेरै विश्वास मूर्ख-पेस्कोभ रूपमा चिनिने पछि, इवान ग्रोजनी अझै पनि त्यो पोस्ट मा मासु खान, उहाँले एक मसीही छ कि बहस इन्कार गरे। अनमोल निकोलस उनको टाउको राखिएको र राजाको अनौठो स्थिति हामीले देख्यौं: मासु खान छैन, तर मसीही रगत पिउन। राजा आफ्नो सेना शहर छोड्न बाध्य भएको थियो संगै यस्तो बयान मा लज्जित र, थियो। यसरी whacky पेस्कोभ विनाश देखि सुरक्षित गरियो।
साहित्य मा उदाहरणहरू
एक पवित्र मूर्ख, एक प्रारम्भिक उमेर देखि सबै ज्ञात को क्लासिक छवि - रूसी लोक Tales इवान मूर्ख को नायक। सुरुमा यो एक निरपेक्ष मूर्ख देखिन्थ्यो, तर यो स्पष्ट भए समय आफ्नो ostentatious को irrationality छ।
NMKaramzin नामको चरित्र सिर्जना Vasiliy Blazhenny, , भय राख्ने निरादर Ivana Groznogo, सबै आफ्नो हिंसात्मक कार्यहरू निन्दा गर्ने। अझै यो एक वर्ण फोहर कामहरू Borisa Godunova को प्रसारण को हरेक कुना मा खाली खुटा हिंडे जो, पनि जाडो को मृत्यु, र यूहन्ना, आशिष् दिनुभएको छ।
यी सबै नायक Karamzin Pushkin प्रेरित परमेश्वरको मूर्ख आफ्नै छवि, उपनाम फलाम टोपी सिर्जना गर्न। मामूली भूमिका उहाँलाई नियुक्त, र केवल एक दृश्य मा प्रतिकृतिहरु को एक जोडी भए तापनि उहाँले जो उहाँले सारा दुःखद घटना भरिन्छ आफ्नो "सत्यको मिशन", छ। कुनै आश्चर्य तिनीहरूले शब्द मात्र होइन चोट सक्नुहुन्छ, तर पनि मार्न भन्छन्। तिनीहरूलाई राजा साना राजकुमार लागू गर्न प्रस्तावित एक पटक थियो जो नै सजाय, माग, स्थानीय केटाहरु आहत र पैसा धेरै टाढा लिए पछि उहाँले Godunov सुरक्षाको लागि अपिल। Simpleton वध गर्न तिनीहरूलाई माग। बच्चालाई को भाग्य को धेरै समाचार यो अघिल्लो चरणमा उल्लेख गरिएको थियो, तर पिच मा फरक, नयाँ छैन। विषयमा पहिले बस whispered भने, अब अभियोग व्यक्ति र सार्वजनिक मा, बोरिस गर्न एक तर्साउने रूपमा सेवा गरेको भनेर गरिएको थियो। राजा आफ्नो प्रतिष्ठा मा एउटा सानो ठाउँ रूपमा, ती काम संकेत, तर यो heinous अपराध फलाम ढक्कन तथ्यलाई मानिसहरूलाई आँखा खोल्न, र यो राजा हेरोदले लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छैन भनेर।
को प्रसिद्धि को Blissful भक्त पक्ष, तर दुःख र कसैले लागि प्रभुको शोषण प्रार्थना शब्दहरू शक्ति द्वारा चमत्कार सिर्जना गर्न आफ्नो क्षमता इनाम मूल्यवान।
म रोटी खान पोस्ट गर्न सक्छन्? पोस्ट मा खान केही रोटी?
एक रूसी shrines को - THEODORE धर्म माता को प्रतिमा
प्रेरित पावलले - नयाँ करारका भन्दा को लेखक
जब Valentina नाम दिन मनाउन
Smirnov Vyacheslav - प्रशिक्षक ऊर्जा अभ्यास
Multivitamin तयारी "Selmevit": प्रयोगको लागि निर्देशन
जो दुई देशहरू बीच कूटनीतिक सम्बन्ध को बिच्छेद मतलब? कारण, परिणाम
किन, शावर पछि, शरीर itches: कारणहरू र उपचार
को अटारी तल्ला पूरा - विकल्पहरू र प्रदर्शन प्रविधि
नैनो र कसरी तिनीहरू हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ के हो?
Sofi मार्च संग सिनेमा: सूची। Sophie Marceau को सर्वश्रेष्ठ सिनेमा
Fanconi गरेको सिंड्रोम को विशेषता के हो? कारण, लक्षण, निदान
कसरी (शुरुआती लागि) कागज बाहिर एक खरायो बनाउन